Top 27 xirfadeed wordpress mawduucyada dukaanka khadka tooska ah 2021
Taabo awoodda adduunka internetka leh Kuwani xusid mudan oo si sahlan loo isticmaali karo WordPress mawduucyada dukaanka khadka tooska ah ee ka shaqeeya websaydh kasta eCommerce. teknoolojiyada sirta awooda badan, ka dhigaya dukaameysiga qadka internetka mid amni ka badan sidii hore, macaamiishana waxay uga jawaabayaan jawigan cusub mid raaxo leh, ku haboon oo aamin ah ganacsiga badeecada iyo alaabada ganacsiga iyo adeegyada, macno malahan inaad martigaliso bandhiga hada. iyo websaydh casri ah oo raadinaya, amni leh oo la isku halleyn karo, iyo isku xirka xalalka ganacsigaElektaroonig wax ku ool ah, ha u sii eegin. Uruurinta mawduucan soo socda ayaa la soo uruuriyay si loo daboolo dhammaan baahiyaha shabakadaada dukaanka internetka.
Jevelin waa mawduuc gogol xaadh ah oo loo yaqaan 'WordPress ecommerce theme'. Awoodda adag ee lagu dhisay Jevelin's WooCommerce ecommerce plugin Suite waxay awood u siineysaa mulkiilayaasha websaydhku inay ku dhisaan dukaamo khadka tooska ah soo jiidasho leh oo shaqeynaya daqiiqado gudahood. Mawduucani wuxuu bixiyaa fursado badan si loo habeeyo qaabka, animation-ka iyo u wareejinta qaabeynta khariidadda alaabtaada.
Hababka lacag-bixinta casriga ah waxaa lagu dhisay Jevelin si ay kaaga caawiyaan inaad sare u qaaddo iibintaada maalinlaha ah habeenkii, halka
si aad ugu socodsiiso taraafikada saqafka iyo u diyaarsanaanta turjumaada iyo ku habboonaanta RTL waxay kuu xaqiijineysaa inaad ku guuleysataydhagaystayaasha ugu ballaaran ee suurtogalka ah. Iskuday Jevelin maanta oo bilow inaad sameyso iibkaas! >
Kalium waa casriyeyn iyo midabo WordPress faylalka iyo websaydhka boutique ee safka kujira. Tani waa xal gebi ahaanba cabsi badan oo xirfadaysan oo u oggolaanaya qof walba inuu si dhakhso leh isugu soo ururiyo degellada daqiiqado. Mawduucani wuxuu kuxiran yahay WPBakery's Page Builder plugin, iyo sidoo kale Revolution Slider iyo LayerSlider, iyo isdhexgal buuxa oo ka baxsan sanduuqa oo la socda sheyga WooCommerce e-Commerce ether.
Kalium waxaa lagu soo buuxiyay faro badan oo la yaab leh, oo ka baxsan boggaga waxqabadka bulshada iyo bogagga sheybaarka oo ay ku jiraan dukaanno badan oo internetka ah iyo sheybaarada 'eCommerce'. Suuqgeynta alaabadaada aduunka oo dhan waligeed ma aheyn mid deg deg iyo fudeyd leh. Tani waa sababta ka sii badanIntaa waxaa dheer, shirkadaha iyo shakhsiyaadka ayaa dooranaya inay bilaabaan ganacsigooda e-commerce ee ku shaqeeya Kalium. Iskuday naftaada oo noqo sayidka dukaankaaga!
Info Dheeraad Ah / Soo Degso
TheGem waa mawduuc mawduuc badan oo WordPress ah oo leh xirfad iyo damac ganacsi. Waa habka cusub oo dhan oo loogu gudbiyo mowqifka mawduuca iyo shakhsiyeynta mid. Isku day mid kasta oo ka mid ah + 70 demos oo leh hal talaabo deg deg ah oo soo dejin ah waadna arki doontaa! TheGem si cajiib ah ayuu uga jawaab celiyaa oo wuxuu siiyaa pixel muuqaallo fiican. Waxay ku habboon tahay qeexidda dukaamada iyo aragtida alaabada iyo qolladaheeda. Ku raaxayso WooCommerce iyo 3 xulashooyinka isdabajooga wada jir. Qoraalada iyo sooyaallada ayaa si fudud shaqsi ahaan loogala xiriiri karaa warbaahinta. Qaabka bogga wuxuu noqon karaa hal bog illaa bogag badan.
TheGem wuxuu leeyahay baararDhinacyo aan xadidneyn iyo dhowr ikhtiyaar oo horay loo sii qeexay oo loogu talagalay h akhristayaasha iyo cagaha. Widgets iyo aagagisa si loo qeexo ayaa sidoo kale la heli doonaa. TheGem waa fikrad ganacsi oo dhan oo hal-hal ah oo ku habboon baahiyaha isticmaalaha si fudud. Shakiga haray waxaa lagu xalin karaa kooxdiisa taageerada macaamiisha! Bal eeg oo is qanci! U fiirso TheGem!
Faahfaahin Dheeraad ah / Soo Degso
Haddii ay sidaas tahay, ku ilaali waqti iyo tamar Webify. Mawduucan dukaanka khadka tooska ah ee WordPress waa xalka weyn ee kaa kicin doona oo aad dhakhso u socon doonta. Qalabku sidoo kale waligiin ku weydiin maayo wax koodh iyo aqoon naqshad ah. Iyada oo ku habboon jiidista iyo hoos u dhigista bogga dhise, qof kastaa wuu soo saari karaa maskaxdiisa hal abuurka ah iyo naqshadeynta wuxuuna dhisi karaa dukaan sare oo internetka ah. In kasta oo Webify ay ku habboon tahay mashaariicda moodada,diyaar u ah in la isticmaalo, xoogaa isbeddello ah halkan iyo halkaas, sidoo kale waxaad u isticmaali kartaa qalabka si aad u iibiso wax gebi ahaanba ka duwan. boqol gaagaaban iyo dhinacyo aan xadidneyn. Khibrad ganacsi oo joogto ah oo aan iin lahayn, Webify sidoo kale waxay damaanad qaadeysaa jawaab celin buuxda iyo iswaafajinta biraawsarka ee shabakadaada. >
Ganacsade waa a
WooCommerce Theme . Waxaa loogu talagalay agagaarka heerka 'WooCommerce eCommerce echomerce plugin Suite. Badeecada ayaa si ula kac ah loogu talagalay in laguugu fududeeyo inaad suuq geyso buugaag aad u tiro badan oo alaabooyin leh ikhtiyaarro badan oo habeyn ah iyada oo loo marayo matoorrada bogagga WPBakery, Live Fursadaha Customizer avanceas. Isku day Ganacsade hadda oo arag waxa heshiiska dhabta ah yahay! Macluumaad Dheeraad ah / Soo Degso
Uncode waa awood leh oo si fudud loo isticmaali karo mawduucyada 'eCommerce' ee hal-abuurka badan. Dareenka iyo gudaha WPBakery ee la xoojiyay jiita oo hoos u dhig bogga, qiimaha ugu sarreeya ee Revolution Slider iyo Layer Slider, iyo shaqeynta eCommerce ee lagu dhex daray WooCommerce. Mawduucani waa musharax ku habboon abuurista saldhig khadka tooska ah ee dhammaan noocyada dukaamada jirka; laga bilaabo dukaamada diiwaanka ilaa dukaamada buugaagta iyo dukaamada dharka, Uncode ayaa wada maamuli kara oo ka dhigi kara inay u ekaadaan sida ugu fiican. Isku day Uncode maanta oo waxaad la yaabtaa sida fudud ee dukaan webka ah u qaabeeyo!
Info Dheeraad ah / Soo Degso Demo
Dukaanley waa xirfadle qurux badan oo ka jawaaba WordPress mawduuc badan. Awoodda ganacsiga ee 'E-commerce' ayaa si buuxda loogu dhisay Dukaan-hayaha si ay kuugu fududaato, markaa waxaad si dhib la'aan ah u iibin kartaa alaabooyinka la soo dejin karo ama la soo dejisan karo, ururin karo oo aad u heli karto lacag-bixinno, aad u maamuli karto agabka alaabta. Waad ku mahadsantahay waxqabadkeedii dhawaanahan, hadda waa mid ka mid ah mawduucyada ugu dhaqsaha badan ee WooCommerce ee suuqa.
Halena waa mawduuc barta laga helo oo isu-eg, hufan oo casri ah e -shabakadda ganacsiga. Qalab xariif ah oo xariif ah si aad ganacsiyadaada ganacsi uga hesho khadka tooska ah habeenkii. Ku wareer dadka ku soo booqda buugyaraha la yaabka leh oo ku mashquul iyaga oo leh saamayn muuqaal ah oo firfircoon iyo goos gooska muuqaalada Cajiib ah AJAX shaandhaynta iyo raadinta Waxay u fududeeyaan iyaga inay helaan alaabada ay u baahan yihiinu oggolow dukaamo kala duwan inay furaan dukaan maalinta la rakibayo. Ku habee daqiiqado iyaga oo leh aragti muuqaal leh oo horumar leh. Tan oo xulashooyinka habayntu waxay kuu oggolaaneysaa inaad shakhsiyeysato boggaga internetka ee Halena. Iswaafaji sumadda bakhaarkaaga iskuna duwo dhinac kasta oo ka mid ah khibradahaaga adeegsiga ugu dambeeya. Halena waxay ku siineysaa qalabka aad ugu baahan tahay inaad kula ciyaarto wiilasha waaweyn. Suuq geyso badeecadaada adduunka oo dhan, Halena!
Faahfaahin dheeri ah / Soo dejiso Demo
Haddii aad raadineyso websaydh eCommerce, kani waa mawduuca dukaanka internetka The WordPress Hanger yaa kara kuu samee. Xirmada, mawduucu wuxuu leeyahay fursado badan oo kuu oggolaanaya inaad bilowdo dukaan xirfadle ah oo khadka tooska ah sida ugu dhakhsaha badan uguna macquulsan shaqo yar k la maal galiyo. Sida adigasi dhakhso leh ayaa loo ogaan doonaa, Hanger sidoo kale wuxuu leeyahay tan ka kooban sanduuqa-sanduuqa oo aad si xor ah u isticmaali karto sida ay tahay. Kaliya ka hubi demos-ka tooska ah faham wanaagsan.
Si kastaba ha noqotee, waad beddeli kartaa qayb kasta oo ka mid ah Hanger-ka oo ha ku raacdo astaantaada T. Haddii aad cusub tahay, waxaad ku bilaabi kartaa dukaanka internetka saldhig oo si xeel dheer u kobciya, Hanger-ku wuxuu wax walba si fudud ugu qaataa Marka laga soo tago barta xuddunta u ah taas oo ah, dabcan, ganacsiga elektarooniga ah, Hanger sidoo kale waxaa ku jira blog nadiif ah. Qeybtani waa mid aad u cajaa'ib badan oo aadan rabin inaad uga tagto meel maran oo aad u isticmaasho halkii loogu talagalay suuqgeynta waxyaabaha ku jira.
A Mawduuca dukaanka WordPress ee khadka tooska ah, sida Hongo , waa qalab kuu iftiimin doona xiisahaaga isla markiiba. Iyada oo dabacsanaan iyo la qabsiga ty, Hongo ay hubineyso dhameystirka shaqooyin badan oo badan.shilinta internetka ee kala duwan. Haddii aad rabto inaad iibiso dharka, qalabka, boorsooyinka, saacadaha, aaladaha, alaabada maqaarka, iwm, u samee dukaan internetka Hongo hadda. Waxaa jira qalab badan oo u diyaarsan-in la isticmaalo oo aad u hayso dhisme ku dhow isla markiiba. Xaqiiqdii, haddii aad ku dhagantahay muuqaalka sanduuqa banaanka, Hongo wuxuu dammaanad qaadayaa degel si buuxda u shaqeynaya oo leh dhowr guji. - saaxiib dhise bogga WPBakery. Waxyaabo kale oo suurtagal ah oo e-commerce ah iyo qayb ka mid ah ayaa sidoo kale qayb ka ah heshiiska. Laga soo bilaabo liiska xulashada alaabada iyo aragtida degdegga ah ee nidaamka shaandhaynta nifty, midabbada midabbada leh, boorarka is-dhexgalka iyo qaabka buugga, Hongo waxay bixisaa wax kasta iyo wax kasta oo aad qiyaasi karto.
CiyaShop waa sheeko hagaagsan oo niify ah WordPress mawduuca dukaanka khadka tooska ah kaas oo kuu oggolaanaya inaad abuurto nooc kasta oo dukaanno internetka ah. Ma jiraan wax yar oo xadidan oo leh qalabkan isku dhafan ee lagu dhisayo aaladaha eCommerce. Xaqiiqdii, xaddidaadda kaliya ee aad la kulmi karto waa fikirkaaga gaarka ah. La soco socodka, ka fikir banaanka sanduuqa iyo fursado cusub oo suurtagal ah ayaa kaa furmi doona isla hortaada, waana ku mahadsan tahay CiyaShop. Si kastaba ha noqotee, haddii aad ubaahantahay xoogaa dhiirrigelin ah, kaliya fiiri afartan ka mid ah tusmooyinka oo arag waxa ku suurtagal ah sheybaarkan bogga soo jiidashada leh.
Qalabka CiyaShop, waxaa ku jira tan maadooyin ah. Laakiin marka hore, adeegso hal-guji layaabka leh rakib oo ku soo bilow demo-gaaga isha bilig bilig. CiyaShop waxay wadar ahaan ka badan tahay 160 qaabab iyo qaybo horay loo sii dhisay, habeyn toos ah iyo dhowr shey oo qiimo lehkharash dheeraad ah ma jiro. Ka bilow iibinta khadka tooska ah ee CiyaShop maanta!
Dhisida farmashiyahaaga ama dukaan caafimaad oo khadka tooska ah kujiro waa shebekad leh MyMedi Looma baahna in la sameeyo naftaada qaadista culus markaad u oggolaan karto MyMedi inuu daryeelo halkii. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waxaad diirada saareysaa oo keliya dhammeynta, adoo la qabsiinaya MyMedi xeerarkaaga sumadda. Intaa waxaa sii dheer, waad sidoo kale tafatiri kartaa oo xitaa abuuri kartaa bogag qaas ah.
MyMedi wuxuu kuu keenayaa astaamo sida waxqabad aad u wanaagsan, iswaafajinta mobilada, Slider Revolution, liiska xulashada, wadaagga bulshada iyo badeecooyinka inta badan la iibsado, si loogu magac daro dhowr Waxyaabaha iibka ah waxaad sidoo kale ku qori kartaa blog kuna kobcin kartaa ganacsigaaga suuq-geynta waxyaabaha ku jira.a
Aora waa mawduuc dukaanka ku jira WordPress khad kasta oo la xiriira guriga iyo qaab nololeedka. Abuur degel websaydh qurux badan oo saamayn ku leh oo kugu qaadan doona waqti yar inaad ku dhammaystirto. Iyada oo leh nashqado badan oo horay loo sii qorsheeyay iyo farsamo jiido-iyo-dhibic, uma baahnid wax khibrad ah si aad ugu bilowdo meheraddaada internetka qaab ahaan. , Hubinta waxqabad cabsi leh marwalba. Ku dar gaadhigii, raadinta tooska ah, iibinta tooska ah, Wareejinta Wareejinta, iyo hal guji rakibku waa qaar ka mid ah astaamaha qabow ee mudan in la xuso. ning. Weli, waxaa jira waxyaabo badan oo aad ka heli karto Qalabka Aora.
Dahabka ayaa noqon doona saaxiibkaaga ugu fiican inta lagu jiro abuurka, maamulkaiyo dayactirka dukaanka dahabka ee internetka. Iyada oo la adeegsanayo qaabkeeda ugu yar iyo soo jiidashada leh, waxaad si fudud u soo jiidan doontaa dareenka qof walba. Waxaa jira tusmooyin kala duwan iyo bogag gudaha ah oo laga kala xusho, kuwaas oo dhammaantood si buuxda wax looga beddeli karo. Tan, waxaad ku abuuri kartaa noocaaga dahabka ah waxaadna ku bilaabi kartaa khadka tooska ah qaab ahaan. Bilaw ahaan, waxaad sidoo kale ku raaxeysan kartaa dhowr casharro fiidiyoow ah oo kaa caawin doona inaad fahanto aasaasiga ka hor intaadan si buuxda u hawl gelin. Maskaxda ku hay, Bijoux sidoo kale waxay cajaa'ibyo u samaysaa astaamaha dahabka. >
Orson waa mid la isku halleyn karo, kheyraad leh isla markaana ka jawaabi karta WordPress mawduuca websaydhka mawduuca. Waa aalad cusub oo milkiileyaasha websaydhadu raadinayaan inay ganacsi aasaasaan.sax khadka tooska ah. Iyada oo leh dhisme awood badan oo WPBakery Page Builder ah, shaqooyinka naqshadeynta websaydhku waa deg deg. Orson wuxuu ku habboon yahay barnaamijyo badan oo ganacsi. Waad ku dabooli kartaa kiis kasta 23 homepage oo kala duwan oo aad geyn karto. Dukaamada casriga xagaaga cusub ama dukaamada tafaariiqda casriga ah. Qalabka iyo dahabka
, badeecooyinka isboortiga ama taleefannada gacanta, Orson ayaa adiga kuugu jirta. Abuur hufnaan dukaamo ama dukaamo bogag badan oo xeel dheer leh dhowr guji. Ku soo dejiso demo ilbiriqsiyo oo si macquul ah u habee. Khibradaada koodh ee hore wax macno ah malahan markay tahay helitaanka astaamo waaweyn. Dukaamada Orson waxay u muuqdaan kuwo aad u fiican waxayna u shaqeeyaan sidii soo jiidasho. Tan oo qaabab madaxeed cabsi leh iyo shaashado gaagaaban oo gaaban ayaa diyaar kuu ah. Slider Kacaankii alKu dayasho carousels qurux badan oo xiiso leh duubey. Waad ku mashquulin kartaa dhagaystayaashaada markay mashquulsan yihiin buugga alaabtaada. Kordhinta SEO ayaa Orson ka dhigeysa ciyaaryahan adag oo ku jira qiimeynta mashiinka raadinta. Sidan, waxaad kordhineysaa taraafikadaada, iibkaaga iyo dakhligaaga habeenkii. Qalabka WooCommerce wuxuu awood u siinayaa awoodaha ganacsi ee Orson, laga bilaabo albaabada lacag bixinta ilaa gawaarida wax iibsiga. Iibso maanta, adoo wata Orson! Faahfaahin Dheeraad ah / Soo Degso
ka WordPress. Mawduucan waxaa ka mid ah in ka badan 12 websaydhyo gebi ahaanba demo ah. Daraasiin madax ah, lugoyaal, cajalado wax soo saar la yaab leh oo waxsoosaar leh oo leh saameyn muuqaal oo la yaab leh, xulashooyinka muuqaalka ee Parallax oo xoog leh iyo gaari-ka-iibsiga dhamaadka-hore ee AJAX oo ay kujiraan qaabab kala duwan oo animation ah really runti ma dhamaato Atelier Showcase awooda dhabta ah ee abuurka dukaanka internetka. SEO-ga asalka ah iyo ka jawaab celinta buuxda waxay kuxiran yihiin heshiiska Atelier, oo ah kan ugu awooda badan fikradaha e-commerce erayga suuqa.
Mr. Dawaarka ayaa ah mawduuc isbeddel ah oo la taagan shaashaddiisa shaashadda oo buuxda. Waxay ku habboon tahay milkiilayaasha ganacsiga tafaariiqda iyo noocyada dharka doonaya inay ku iibiyaan wax soo saarkooda internetka. Haddii aadan rabin inaad samaysato dukaan internetka ah, wali waad u isticmaali kartaa mawduucan inaad ku dhiirrigeliso meheraddaada ama aad adduunka ugu soo bandhigto alaabadaada iyo astaamahaaga adigoo curyaaminaya aaladda ay leedahay eCommerce ee guddiga xulashada mawduuca. . Mawduuca 'Tailor WordPress' wuxuu kuu soo bandhigayaa adiga ikhtiyaarro u gaar ah oo adiga kuu gaar ah.Iyagu waa ikhtiyaarro midab aan xad lahayn, taageero muuqaal isu eg, shaashad astaan ​​gaar ah, indho qabasho madax ku dheggan, isdabamarinno la dhisay, iyo shaqeynta xulashada xulashada xulashada Mawduuca dhisme bogga WPBakery wuxuu kuu fududeynayaa inaad abuurto naqshad qaabeynta bogga oo aan xadidneyn adoo adeegsanaya is-jiididda iyo hoos u dhigista. Intaa waxaa dheer, Mr. Tailor wuxuu WooCommerce diyaar u yahay inuu kaa caawiyo inaad si fudud ugu iibiso alaabada jirka, dhijitaalka ah, ama alaabada ku xiran. Mawduucani wuxuu kaloo leeyahay maareynta dukaanka oo awood badan, nidaamka daba-galka ee amarka, canshuurta iyo ikhtiyaarrada rarka, qeybaha aan xadidnayn iyo qaybaha hoose, nidaamka kuubannada la dhisay,
bogga lacag bixinta
iyo kalkuleyte fudud oo maraakiib ah.
Mudane Dawaarlaha ayaa macaamiisha u oggolaanaya inay qiimeeyaan ama qiimeeyaan alaabadaada, waxay kaa caawinayaan inaad falanqeyso warbixintaada dukaanka, iyo muuqaalka xulashada ikhtiyaariga ah. Faahfaahin dheeri ah / Soo dejiso
Vapas is a nic Mawduuca dukaanka websaydhka WordPress ee loogu talagalay dukaamada vape-ka ee internetka. Iyada oo caan ku ah uumiga, waxaa jira fursad wanaagsan oo aad ubaahantahay inaad sidookale usoogasho warshadaha. Adoo adeegsanaya Vapas awood badan oo si fudud loo isticmaali karo, hadda si dhakhso leh ayaad u dhisi kartaa joogitaanka khadka tooska ah. Adigoon u baahnayn inaad xariif ku noqoto cilmiga farsamada, waxaad bilaabi kartaa inaad ku soo bandhigto badeecada qiiqa internetka sida pro. Marka la isku daro qaababyada horay loo sii qorsheeyay iyo WPBakery bogga dhise, qof walba si dhaqso ah ayuu u farsameyn karaa alaabada heerka koowaad. . Waxaa intaa sii dheer, waxaad heleysaa tanno badan oo widget ah, Slider Revolution, raadinta Ajax,
meenka meeriska , animations nifty, iyo a mob menu.jasiirad fiican sidoo kale. Maalgashi yar, hadda waxaad bilaabi kartaa ganacsi khadka tooska ah waxaadna si dhaqso ah ugu samayn kartaa Vapas.
More Info / Download Demo Mildhill
Dukaanada dabiiciga ah iyo cuntada, Mildhill waa kan saxda ah ee dukaanka tooska ah ee WordPress ah mawduuca si buuxda loo xakameeyo joogitaanka khadka tooska ah. Waxaad wax ku qaban kartaa mid ka mid ah sagaal ka mid ah noocyada kala duwan ee hal abuurka iyo saamaynta badan leh. Maskaxda ku hay in dhammaan qaababka Mildhill ay yihiin 100% la habeyn karo oo aan loo baahnayn in la taabto oo la saxo hal xariiq oo koodh ah. Isku-darka bogga dhise WPBakery wuxuu furayaa fursado aan xad lahayn iyadoo aan loo eegin heerka xirfaddaada.
Mildhill wuxuu la yimaadaa qaabab lagu kalsoonaan karo iyo shaqooyin kaa caawin doona inaad ka soo dhex baxdid dadka. Tan oo walxo ah, bogag gudaha ah, qaababka baloogyada, gaagaaban, iyo qaababka cinwaanka.madaxa dhamaantood waa la qeexay oo diyaar ayey u yihiin inaad ka faa iideysato Mildhill. Ka qeyb qaado adiga oo dhaqaajinaya soo dejiyaha xogta ee hal-ck ck oo aad ku bilowdo wadada saxda ah marba marka ka dambeysa sii horumarineysa Mildhill.
Artemis waa a WordPress wejiyo badan
takhasus leh ganacsiga elektaroonigga ah. Way fududahay in la fahmo oo lagu habeeyo soo degitaankeeda demo hal-guuritaan dareen leh. Ka hel dalabyo gaar ah oo la jaan qaada waxyaabo badan oo tayo sare leh. Artemis waxay leedahay khariidad jawaab celin leh oo leh xulashooyin badan oo loogu talagalay menusyada iyo midabbo aan xadidnayn. Waxaa ka mid ah dhinac dhinac dukaanka firfircoon, baloog bog, iyo sooyaal la beddeli karo. Xitaa waxaad kaheli doontaa qaybta gaarka ah ee ogo iyo favicons. Artemis waxay bixisaa isdhexgalka WooCommerce si loo dhiso dukaanno khadka tooska ah ee internetka laga helo. Waxa uu leeyahayWaxa kale oo jira minicart, liisaska rabitaanka iyo bogga xiriirka oo la qeexo. Iskuday qaabab kala duwan oo galleri ah si aad u muujiso alaabta. Isdhaxgalka Slider Revolution wuxuu u ogolaanayaa sawirada si ay u helaan tayada muujinta ugu fiican! Artemis waxay diyaar u tahay tarjumaada labada po faylasha oo si buuxda loogu duubay iyadoo lagu daro bandhig muuqaal ah. Waxay ku siineysaa buug-gacmeed, aragti dhakhso leh oo ku saabsan badeecada iyo soo koobitaanka dambiilaha menu. Abuureyaashu waxay u qaabeeyeen Artemis inay noqoto bixiyaha ugu fiican ee adeegga ganacsiga oo dhan. Sida magaceeda oo kale, tan ilaahad. Waa 100% waxayna ku habboon tahay shaashadaha, qaababyada iyo bog furayaasha. Kala duwanaanta ugu fiican! Waxay la timid casriyeyn bilaash ah iyo dukumiintiyo waaweyn! Si fiican u fiirso Artemis waxaadna hubsan doontaa inay kugu qancin doonto awooddeeda waallida ah! Adeegso Artemis!
Ja waa mawduuc websaydh e-commerce ah oo ujeeddooyin badan leh, oo la isku halleyn karo oo dhinacyo badan leh. Qalab aan xuduud lahayn oo loogu talagalay dhisida degello casri ah oo gaar ah. Dhexgal plugins premium, websites demo, iyo bogagga sheybaarka si loo hagaajiyo shaqadaada. Tafatirka tooska ah iyo u habeynta muuqaalka ayaa kuu oggolaaneysa inaad u qaabeyso sidii pro oo aan qorin xariijin lambar ah. Dukaammada khadka tooska ah ee noocyada kala duwan waxay jecel yihiin inay la shaqeeyaan Juun. Bogagga baqdinta leh ee faylalka faylalka iyo bogagga wax soo saarka ee gaarka ah ayaa ku soo bandhigaya alaabadaada qaab.
Slider Revolution iyo LayerSlider waxay kuu ogolaanayaan inaad ku qanciso dhagaystayaashaada animations casri ah. ILightbox yaabka leh iyo Apple Live Photo saamaynta muuqaalka ah ayaa ka dhigaya waxa ku jira inay muuqdaan. Nidaamka isku-dhafan ee WooCommerce wuxuu kuu oggolaanayaa inaad suuq geyso alaabadaada adigoon dhidid dhidid. Shabakadaha dukaanka ee cajiibka ah, liisaska iyo miirayaasha qaaska ah ayaa dukaankaaga u keenaya qarniga 21-aadqarnigii. Jawaab leh oo iskutallaabta ku habboon, Juunyo wuxuu ballaadhiyaa dhagaystayaashaada habeennimo. Ka hel Juun maanta oo u fiirso meheraddaadu inay kororto! >
Kordhi iibkaaga dukaamada ugu dabacsan ee WooCommerce magaalada ku yaal. Soo bandhigida Shoperific, oo ah mawduuc dukaanka khadka tooska ah ee WordPress ah oo si aad ah u sarreeya, wax ka qabashada nooc kasta oo ganacsi ama niche ah. Adoo diiradda saaraya ecommerce, sheybaarka boggan wuxuu kuu oggolaanayaa inaad soo bandhigto alaabooyin la yaab leh, kala shaqeyso xulashooyinka lacag bixinta, iyo inaad ku darto liiska macaamiishaada. ku dar macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan badeecadaada. Ka sokow, waxaad u isticmaali kartaa baloogga suuqgeynta waxyaabaha oo aad abuuri kartaa xitaa ganacsi intaa ka sii badan.ui waxay ka dhigeysaa mid aad u nidaamsan oo si sahlan loo isticmaali karo. Waxyaabaha kala duwan waxaa ka mid ah menu qaas ah, miisaska, baarka horumarka, liiska qiimaha, isbarbardhiga alaabta, iyo Khariidadaha Google. Intaas waxaa sii dheer, waxaad khabiir ku noqon kartaa ganacsade waxyar oo qasab ah mahadnaqa waxyaallaha u diyaarka ah ee la adeegsanaayo ee Shoperific ay kuu hayso. Tababar
Handy waa mawduuc la isku halleyn karo oo WordPress ah oo loogu talagalay ganacsiga iyo ganacsiga. Waa mawduuc adag oo wejiyo badan leh oo loo yaqaan 'WordPress' oo si toos ah loo saxiixay ujeedduna tahay u adeegidda dukaamada khadka tooska ah ee ku takhasusay suuq-geynta alaabada gacmaha lagu sameeyo ama nooc kasta oo ay tahay. -ins, muuqaalada iyo sheybaarada lagu dhex daray jawi dareen leh. iyo isdhexgal isticmaale-gadaal awood leh oo u oggolaanaya qof walba inuu abuuro dukaan u gaar ahs tayada xirfad online on daqiiqo. Isku soo wada duuboo, Handy waa mawduuca ugu dambeeya ee kaydinta khadka tooska ah ee farsamayaqaannada, farshaxanleyda iyo dhammaan noocyada ganacsiyada hal-abuurka ah ee u baahan inay dhisaan aasaas adag oo ku saabsan ganacsigooda internetka. Aurum
Aurum waa muuqaal la xasuusto oo si geesinimo leh u muujiya mawduuca dukaanka khadka tooska ah ee WordPress. Mawduuc khaas ah oo loo abuuray inuu noqdo xal websaydh wax ku ool ah oo hufan oo loogu talagalay dukaamada khadka tooska ah ee nooc kasta leh. Horumariyayaashu waxay kuxirxireen nashqado faa iido leh, sheybaarro, wijaalooyin, qalab, iyo xariiqyo gaagaaban oo loogu talagalay dhismaha degel casri ah oo kaydka internetka ah. Laakiin Aurum awooddeeda dhabta ah waxay kujirtaa falsafadeeda qaabdhismeedka quruxda badan. Mawduucani waa mid aad u fudud oo midab yar oo midab leh oo ka muuqan kara Aurum bogaggeeda badan ee qaabeynta iyo boggaga internetka.
Aurum ayaa markaa ku habboon dukaamada khadka tooska ah ee wax ka qabta qaybaha suuqyada, gaar ahaan qaababka miyir-qabka leh, oo ay ku jiraan
, dukaamada dahabka lagu iibiyo, buugaagta buugaagta lagu iibiyo,
dukaamada tiknoolajiyadda iyo kuwa kale. shaqeynta ganacsiga e-commerce. Mawduucani sidoo kale waa ku habboon yahay bogagga shabakadda sababtoo ah sida ugu fudud ee aad ugu calaamadin karto aqoonsi kasta oo aad rabto. Intaas waxaa sii dheer, waxay si qoto dheer u qurux badan tahay la qabsiga nadiifka ah iyo qabow. Intaa waxaa sii dheer, Aurum wuxuu adeegsadaa qalab casri ah sida madax madax banaan, bogag soo dhaweyn qurux badan, gaagaaban WPBakery Page Builder shortcodes, iyo astaamo howlo dheeri ah. Marka la soo koobo, Aurum waxay caddeyn u tahay in mararka qaarkood waxyaabaha dhalaalaya ay dhab ahaan noqon karaan dahab. >
Nantes is a thèAad u qeexan oo muuqaal ah codkar ah oo ka jawaabaya ujeedooyin badan oo ujeedooyin leh aniga ayaa i soo dhoweynaya. Waxaad u adeegsan kartaa tiro badan oo ah barnaamijyo khayaali ah inta udhaxeysa, maaddaama Nantes ay fiicneyso saddex waxyaalood. Marka hore, waxay awood u leedahay inay si fudud suuq ugu soo bandhigto badeecadaha iyo adeegyada, u liis garayn karto uguna soo bandhigi karto dadweynaha. Marka xigta, awood u siinta mulkiileyaasha websaydhka inay soo saaraan qalfoof qaabdhismeed leh oo AJAX ah oo la aamini karo oo loogu talagalay codsiyada websaydhka adag. Waxay la kulantaa oo ka sarreysaa rajooyinka shirkadaha, ganacsiga elektaroonigga ah iyo websaydhada guud ee dukaamada internetka leh nidaamkooda xoogga leh ee qiimeynta sare. Mawduucan sidoo kale wuxuu leeyahay jiidistiisa iyo hoos u dhigeeda bogga dhise iyo taageero buuxda oo isku dhafan oo loogu talagalay WooCommerce. Ugu dambeyntiina, Nantes waxay leedahay menu aad u qurux badan oo moobiil ah, is rogrog iyo taabasho, dambiil, dambiil AJAX, raadine ee alaabada iyo miirayaasha. Gabagabadii, Nantes waa mawduuc si aad ah loo qabtay, wuxuu ka dhigayaa inta hartay mid xun. Faahfaahin dheeri ah / Soo dejiso
Waqooyiga waa qurux mawduuc ganacsi WordPress isku dheelitirnaan badan elektiroonigga. Mawduucan sidoo kale waa muuqaal fiirin, dhalaalaya, caqli badan isla markaana si dhakhso leh u rara Woqooyiga waxay kufiicnaan doontaa codsiyada khaaska ah sida dukaamada internetka ee casriga ah, dukaamada internetka ee aqoon isweydaarsiga. Waxay sidoo kale ku habboon tahay naqshadeynta dukaamada khadka tooska ah ee istuudiyaha, dukaamada khadka tooska ah ee hal abuurka leh, dukaamada farshaxanka ama farshaxanka dukaamada internetka iyo ganacsiyada kale ee la midka ah. Waxaad sidoo kale daqiiqado gudahood ku soo saari kartaa waxyaabaha qarxa, saameynta sare iyo bogagga shabakadda cajiibka ah iyadoo aan loo baahnayn aqoon sireed.. Isticmaalayaasha ugu dambeeya sidoo kale way isticmaali karaan. Waad ku raaxeysan kartaa khibraddan si habsami leh loogu talagalay ee loogu talagalay iyadoo la adeegsanayo menus-kiisa kala sarreynta, dhinacyada aadka loo habeyn karo, iyo carousels wax soo saarka quruxda badan. Mawduucan sidoo kale wuxuu ka kooban yahay faylalka sheyga-daadka-daadinta, bogagga istiraatiijiga ah ee 'Parallax', is-dhexgalka WooCommerce, iyo hagaajinta mashiinka raadinta ballaaran. Guud ahaan, Waqooyiga waa mawduuc og halka uu ku socdo. >
Oxygen waa qurux qurux yar oo fudud oo WooCommerce WordPress ah. Abuureyaashu waxay dhisteen mawduucan anfacaya iyadoo looga dan leeyahay in la dhiso xal dhammaystiran, dhammaystiran, oo si taxaddar leh loo qorsheeyay WooCommerce ecommerce xal. Mawduucani sidoo kale wuxuu ku habboon yahay dukaamada khadka tooska ah ee yar yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee raba inay ku ilaashadaan sawirradooda macaamiishooda. The m mQaabdhismeedka Oxygen ee bogagga iyo mawduucyada bogga, oo aad si fudud ugu rakibi karto, dhammaantood waxay diiradda saarayaan khibrad sahlan oo adeegsade ah. Intaa waxaa dheer, mawduucan wuxuu doonayaa inuu kugu hago inta aad ku jirto boggaaga oo dhan adiga oo isku dareensiinaya inaad joogto guriga isla waqtigaas. Waxay ka dhigeysaa macaamiishaada kuwo raaxo leh oo ku filan inay lacagtooda ku kharash gareeyaan badeecadaada oo ay noqdaan macaamiisha markii ugu horeysay. Natiijo ahaan, way soo noqon karaan oo wax ka iibsadaan websaydhkaaga. Intaa waxaa sii dheer, qaababka xiisaha leh ee Oxygen, qaababka madaxa, iyo naqshadaha wax ku oolka ah ayaa hubaal ah inay kordhin doonaan qanacsanaanta macaamilkaaga oo u tarjumi doona iibka. Ugu dambeyntiina, Oxygen wuxuu adeegsadaa aaladaha AJAX ee horumarsan iyo astaamaha HTML5 si ay ugu neefsadaan hawo nadiif ah dukaan kasta oo internetka ah. Iskuday maanta!
Waad ku mahadsantahay booqashada Colorlib iyo aqrinta qodobkan! Aad ayaan u qadarinaynaa! Maintenant, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad barato sida loo u sameeyo degel adoo adeegsanaya bilaash ah WordPress mawduucyada. na sababi inaan helno guddi haddii aad doorato inaad iibsato sheyga la soo sheegay. Fikradaha kujira boggan annagaa iska leh mana helno gunno dheeri ah oo dib-u-eegis togan lagu sameeyo.
23 mawduucyada wordpress ee cagaaran iyo bey'ada-saaxiibtinimo 2021
2021-07-21 18:40:10 | Degel
Tani waa liistada ugu dhammaystiran ee mawduucyada aadka u xeel dheer ee cagaaran iyo jawiga ku habboon WordPress ee laga heli karo suuqa, haddii ay tahay shirkad xirfadlayaal bey'adeed ama muwaadin is-hoosaysiiya oo adduunka ah, barnaamijyada WordPress ayaa ku siin kara sagxadda. Sidee wax u qabata...
16 mawduucyada word gur retro iyo retro ee loogu talagalay hipsters 2021
2021-07-21 18:26:32 | Degel
Raadinta ugu wanaagsan guridda iyo mawduuca WordPress mawduuca si aad uga dhex muuqato adduunkan casriga ah? Halkan waxaad ka heli doontaa mawduucyada ugu fiican ee loo yaqaan 'hipster' ee loogu talagalay meheradaha yaryar, makhaayadaha, timo jaraha, baloog garaynta, degel shaqsiyeed iyo inbadan oo ...
Top 25 ugu fiican mawduucyada wordpress cusub 2021
2021-07-21 18:19:04 | Degel
Si taxaddar leh loo ururiyey oo ka mid ah mawduucyada cusub ee ugu wanaagsan WordPress ee soo bandhigaya demo badan, waxyaabo badan, iyo bog dhisme gacan qabad leh. Ganacsade wanaagsan waligiis kuma guul darraysto inuu ka faa'iideysto fursad, internet-ku waa macdan dahabi ah oo cidla looga tago. Dho...
27 mawduucyada wordpress ugu fiican 2021
2021-07-21 18:00:55 | Degel
Liis dhameystiran oo ah mawduucyada arooska WordPress ugu fiican sanadka 2021 iyo wixii ka dambeeya. Mawduucyadani waxay leeyihiin wax kasta oo lagu abuuro degel xusuus xusuus leh oo lagu muujinayo saaxiibbadaada iyo qoyskaaga Arooskaagu waa mid ka mid ah meelihii ugu muhiimsanaa noloshaada. Wax wal...
43 mawduucyo badan oo caan ah oo wordpress ah 2021
2021-07-21 17:28:47 | Degel
Dhawaan waxaan tijaabiyey tijaabo: ma u isticmaali karaa mawduucyo badan oo WordPress ah bogag badan oo macaamiil ah? (Iyaga oo aan ogayn. ) Gunaanad? Waxaad ku sharraxday inaan awoodo! Adiguna adiguba Adiga ayaa sidaa ah, waxaan bartay boqolaal mowduucyo waxaanan aakhirkii doortay liis 44 ah iyadoo...
23 mawduucyada ugu fiican ee shirkadaha maaliyadeed ee wordpress ee 2021
2021-07-21 17:12:00 | Degel
Maanta waxaan eegi doonaa mawduucyada maaliyadeed ee WordPress ee shirkadaha maalgashiga, hay'adaha maaliyadeed iyo xitaa bangiyada internetka iyo adeegyada amaahda Mid baa arki kara sababta cadaadisku u weyn yahay, maxaa yeelay baahida loo qabo degel Soo jiidasho leh ayaa ka sarreeya dhammaan baahi...
16 mawduucyada ereyga qurxinta ee goobaha ecommerce 2021
2021-07-21 16:54:46 | Degel
Ma dooneysaa inaad dhisato degel eCommerce ah si aad u muujiso una iibiso dahabka? Mawduucyadan mawduucyada 'WordPress' ayaa ah sida saxda ah ee aad u baahan tahay si aad u muujiso ganacsigaaga dahabka ah isla markaana aad ugu iibiso alaabadaada internetka, macaamiisha badankood way diidi doonaan in...
30 ugu fiican mawduucyada wordpress ee 2021
2021-07-21 16:43:02 | Degel
Liis aad u tiro badan oo ah la talinta ugu casrisan uguna xirfada badan WordPress mawduucyada si aad kor ugu qaaddo ganacsigaaga maanta Halkii aad ku kasban lahayd sixirkaaga ama aad qarash badan ku bixin lahayd si aad xirfadle u kireysato, waxaad ku dadajin kartaa howsha adigoo wata mowduuc nadiif ...
Top 17 Shirkadaha Suuqgeynta Ku Xirnaanshaha Mawduucyada Mawduucyada 2021
2021-07-21 16:33:32 | Degel
Ma dooneysaa inaad si deg deg ah u dhisto degel suuq geyn ah? Mawduucyadan WordPress ee loogu talagalay suuqgeeyayaasha kuxiran waa sida saxda ah ee aad u baahan tahay: Haysashada degel si cad isu caddeeya inuu ku xiran yahay barxad caan ah, la aasaasay oo lagu kalsoon yahay sida WordPress waxay ku ...
18 mawduucyada ereyada miisaanka ereyada 2021
2021-07-21 16:23:22 | Degel
Isku soo wada duuboo agabyada qiimaha sare leh ee aaladaha WordPress ayaa kaa caawin doona inaad la kulanto dalabaadka macaamiishaada oo dhan waxaadna ka badbaadi doontaa xawaaraha nolosha ee cakiran, maaddaama mawduucyada horay loo sii qorsheeyay ay noqon karaan waqti badbaadin dhab ah, gaar ahaan ...
50 mawduucyada ugu fiican ee woocommerce si loo dhiso estore 2021
2021-07-21 16:19:28 | Degel
Aynu eegno mawduucyada WooCommerce WordPress ee ugu wanaagsan nooc kasta oo ka mid ah ecommerce. Waxaan ku soo xulnay mawduucyo leh horudhaca alaabada AJAX, naqshad qurux badan, kala duwanaansho badan oo dimuqraadi ah iyo taageero weyn. Websaydh waa aalad dhiirrigelin wax ku ool ah oo wax ku ool ah ...
14 qaabka ugufiican qaabka wakaaladaha wordpress 2021
2021-07-21 16:12:04 | Degel
Halkan waxaad kaheli doontaa dhamaan wakaaladaha ugufiican qaabka WordPress mawduucyada aad u adeegsan karto websaydhkaaga ama mashruucaaga. Dhaqanka iyo moodeelku dhammaantood waa soo jiidasho iyo qurux. Matalaad alaabtii ugu dambaysay ee faylalka ee tusaysa moodooyinka iyo naqshadaha moodada ee to...
Top 25 mawduucyada wordpress ee iskood u shaqeystayaasha 2021
2021-07-21 16:08:21 | Degel
Kuwa ugu fiican uguna fudud ee loo isticmaali karo mawduucyada WordPress ee wariyeyaasha madaxa-bannaan ee kaa caawin doona inaad kordhiso kartidaada. Caan ka noqoshada internet-ka ayaa albaabada u furtay dadka doonayay inay shaqeeyaan oo ay ku noolaadaan nolol madaxbanaan. Inta lagu jiro waqtigan, ...
Mawduucyada wordpress ee ugu fiican naqshadaha iyo shirkadaha dhismaha 2021
2021-07-21 15:54:42 | Degel
Aruurinta dhammaystiran ee qaab dhismeedka ugu fiican WordPress mawduucyada shirkadaha, faylalka iyo bogagga shabakadaha dhismaha iyo baloogyada. Qaab dhismeedka ayaa had iyo jeer ahaa adeeg qaali ah iyadoo ay ugu wacan tahay qeexitaankiisa iyo kharashka badan. Ganacsigan waxaad ka heli kartaa oo ke...
20 cabsi bilaash ah 2021 bootstrap navbars tusaalooyin
2021-07-21 15:38:33 | Degel
Abuur habka ugufiican, uguna habboon, uguna habboon bogaggeenna bilaashka ah ee Bootstrap navigation bar. xoqid Badbaadso WAQTIGA iyo LACAGTA! Helitaanka macluumaad iyo bogag waxtar leh ayaa u fududaan doonta isticmaaleyaashaada. WAAD SI FUDUD ugu dari kartaa websaydhkaaga sidoo kalena waad...